CALEEMAHA ORCHID WAXAY LUMIYEEN TURGOR IYO LAALAABKII: LAGA YAABO DHIBAATADAN, SIDA LOO SOO CELIYO CADAADISKA UNUGYADA IYO DIB U SOO CELINTA CAAFIMAADKA UBAXA, WAXA LA SAMEEYO SI LOOGA HORTAGO? - SOOSAARKA DALAGGA
Maxaa la sameeyaa haddii caleemaha orchid ay lumiyaan turgor iyo lakabka? Maxay tahay sababta dhibaato?
Marmarka qaarkood, iyada oo ay sabab u tahay daryeel aan habooneyn ee orchid, waxay leedahay dhibaatooyin caleemo. Waxay noqdaan kuwo jilicsan, luminta lafdhabarta, waxay noqdaan jaalle. Marka laga eego dhinaca aragtida sayniska, hababkaas oo kale waxaa lagu magacaabaa luminta turgor. Xaaladani ma aha mid aad u yar.
Maqaalku wuxuu sharxi doonaa sida looga hortago tan, maxay yihiin sababaha, sida loola tacaalo dhibaatada.
Cadaadiska Turgor - waa maxay?
Dhammaan unugyada nool ee ubaxa waa la daboolay. Torkor waa marka derbiga unuggu uu ku jiro xaalad kacsan horumarinta cadaadiska gudaha. Cadaadisku waxay soo baxdaa marka unugyada biyuhu ay ku galaan xuubka, iyo cytoplasm ee unugyada waxaa lagu cadaadiyaa xajinta.
Waa muhiim! Haddii aan ku hadalno erayo badan oo la fahmi karo, waxaan ka fakari karnaa lumitaanka turgor tusaale ahaan caleenta. Caleenta caleen waa dhadhan - turgor waa, jilicsan iyo dhirbaaxo - dhirta ayaa luntay. Dareemida la'aanta waa qallayl.
Waa maxay doorka ubaxu ku ciyaaraa?
Nolosha geedka, wuxuu ciyaaraa door muhiim ah. Unugyada ku jira xaalad kacsan ayaa lagu riixaa midba midka kale. Tani waxay siinaysaa qaar ka mid ah dabacsanaanta xubnaha jirka ee orchid. Sidoo kale turgor ayaa looga baahan yahay shaqada caadiga ah ee koritaanka, uumiga, dhaqdhaqaaqyada. Waqtiga koritaanka, xididdada ubaxa waxay awood u leeyihiin inay ka caawiyaan inay riixdo qaybaha ciidda. Stomata waxay u furan tahay turgora.
Tilmaamayaasha yaraynta cadaadiska turgor
Caleemaha ayaa ka baxa, xoqin.
Waxay u eg yihiin dangleska hoos u dhigaya.
Elasticity waa lumin.
Foomka xoqida warqadda.
Duufaanta ayaa ka baxda.
Xaaladaha aad u sarreeya, caleenta ayaa dhici karta.
Sababaha macquulka ah
Caleemaha ubaxa waa kuwo kulul. Xannaaneeyayaasha badanaa waxay la kulmaan dhibaatadan inta lagu jiro xilliga kuleylka, haddii dherigu uu aad ugu dhow yahay qalabka kuleylka ama xagaaga, marka raajooyinka tooska ah ee qorraxdu ku dhacaan orchid. Qoyaanku si dhakhso ah ayuu uumi-baxayaa mana haysto wakhti uu ku soo kabsado.
Ciidda cufan. Nidaamka asaasiga ah wuxuu u baahan yahay marin qadar ah oo ku filan hawo nadiif ah. Qalitaan aan habboonayn ama dhulka waqti ka dib, qoyaanka waxaa lagu hayaa substrate. Xididdada "qanjaruufo" iyo kallana. Hawlaha nukliyeerka ku filan, joojiso in ay u socoto caleenta, oo ay lumiso turgor.
Dhar khaldan. Bacriminta waxaa lagu dabaqaa inta lagu jiro waraabinta. Badanaa waa inaadan sameeyn tan, sida saliidaha macdanta ah ee ka samaysan kakabka ayaa lagu keydiyaa ciidda wuxuuna dhaawici karaa xididada. Waa la oggol yahay in ay isticmaalaan kaliya Bacriminta kuwa loogu talagalay gaar ahaan orchids.
Cudur. Marka laga soo tago la'aanta turgor, waxaad arki kartaa dhibco iftiin ah, xargaha, ubaxyada iftiinka, taas oo markhaati ka ah cudurka dhirta. Cudurku wuxuu noqon karaa fayras, fungal, bakteeriyo.
Ubaxa ayaa sidoo kale lumiya turgor sababtoo ah duufaanta taangiga. Roots oo ka soo baxa godadka dheecaanku ma shaqeynayaan inta ugu sareysa.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan sababaha suurtagalka ah ee lumitaanka qiiqa caleenta orchid:
Dhibaatooyinka xun ee dhirta
Biyuhu waa saldhigga nolosha noolaha. Warshad xumida ayaa lumisa dareeraha loo baahan yahay koritaanka iyo horumarka wanaagsan, macdanta ku jirta. Dhumida turgor waxay si xun u saameyneysaa orchids. Adiga oo aanad qaadin tallaabo waqtigaa, waad waayi kartaa ubaxa.
Markaad ka walwalsan tahay?
Haddii luminta turgor lagu arkay dhowr bog oo hoose, inta soo hartayna waxay ku jirtaa nidaam qumman, ka dibna tani waa geedi socod dabiici ah. Orchid waxay tuuraan caleemaha hore iyo dhammaantood. Xaaladdan, ma jiro wax la qaban karo. Waa inaad sugto jaalaha iyo qalajinta xaashida, ka dibna si taxadar leh uga saar.
Sida loo soo celiyo xaaladda caafimaadka leh ee caleen caleen ah?
Ka feker waxa la samaynayo haddii caleemaha ubaxa ay yihiin kuwo la duubay:
Marka hore, kormeer muuqaal ah ayaa la sameeyaa. Waa lagama maarmaan in la go'aamiyo in ubaxa uu jiran yahay. Haddii calaamadaha cudurka la ogaado, daaweyntu waa inay isla markiiba bilowdaa.
Haddii aysan jirin wax cudur ah, waxaad u baahan tahay inaad xasuusatid markii uu dhirta ugu dambeysay la waraabiyey, bacrimiyey, buufin. Waxaa macquul ah in uu leeyahay la'aanta qoyaan ama faa'iido waxtar leh. Waxaa laga yaabaa in orchid laga saaro qorraxda. Dabiiciga ubaxa waxaa lagula talinayaa inuu dib u eego daryeelka iyo raaco dhammaan sharciyada.
Daryeelka sax ma yahay, oo miyuu turgor lumay mar kasta? Sidee loo soo celiyaa caafimaadka geedka kiiskan? U baahan tahay inaad eegto nidaamka asaasiga ah.
Badanaa, sababtoo ah ciidda is dulfuulan ama baakooyinka cidhiidhiga ah, ayaa xididdada kalluumeysiga. Haddii cabsida la xaqiijiyo, ubaxa wuxuu ka soo baxaa dheriga, xididdada caleemaha laga saaro, goobaha jarjaran ayaa la baaraandegaa, dhulkuna waxaa lagu beddelaa substrate cusub.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyo ku saabsan sidii loo soo celin lahaa qallalka caleenta orchid:
Ha ilaawin inaad waraabiso. Wax badan laguma daadin karo, laakiin biyo la'aanta waa wax aan loo baahnayn. Liquid - qulqulaya, jilicsan.
Joogtee xaaladaha heerkulka ugu fiican.
Waqtiga si aad u dalbato bacrimin. Lama oggola wax ka badan 1 mar bishiiba.
Deegaanka - sida ugu dhow dabiiciga ugu macquulsan.
Si looga hortago lumitaanka turgor, marka hore, waxaad u baahan tahay daryeel habboon iyo xaaladaha xabsiga. Haddii, si kastaba ha ahaatee, dhibaatada la helay, waxaad u baahan tahay inaad si dhaqso ah u qaadatid, haddii kale orchid way dhiman doontaa.